हरेक काममा चुनौती हुन्छ, व्यवस्थापन मुख्य कुरा हो : रेश्मा केसी, प्रोडक्सन डिजाइनर। - Malayakhabar
होम पेज अन्तर्वार्ता हरेक काममा चुनौती हुन्छ, व्यवस्थापन मुख्य कुरा हो : रेश्मा केसी, प्रोडक्सन...
हरेक काममा चुनौती हुन्छ, व्यवस्थापन मुख्य कुरा हो : रेश्मा केसी, प्रोडक्सन डिजाइनर।
‘नेपालमा साँच्चिकै लोकेसनमा सुटिङ गर्न सकिन्छ । यो बजेट र चलचित्रको लुकको हिसाबले पनि राम्रो हो । तर, यस्तो ठाउँमा राम्रो आउटपुट निकाल्न निर्देशक, छायाँकार र आर्ट डिरेक्टरले राम्रो तयारी गर्नुपर्छ भन्नुहुने रेश्मा केसी मूलतः प्रोडक्सन डिजाइनर हुनुहुन्छ । सानैदेखि नै अर्थात् चार–पाँच कक्षामा पढ्दादेखि नै भ्वाइस ओभर गर्नुभएका उहाँ पछिल्लो समय प्रोडक्सन डिजाइनरका रूपमा आफूलाई अब्बलरूपमा प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको छ । उहाँको कार्यले प्रशंसा पाइरहँदा उहाँको व्यस्तता पनि त्यत्तिकै रहेको पाइन्छ । नेपालबाहिर रहेर एमबीएसम्मको अध्ययन गर्नुभएकी रेश्मा आफ्नै देशमा केही गरांै भनेर यहाँ आउनुभयो र आफ्ना काममार्फत् सबैको मन जित्न सफल हुनुहुन्छ ।
एउटा श्रव्यदृश्य प्र्रस्तुति दर्शकसम्म आउनका लागि दर्जनौंको मिहिनेत रहेको हुन्छ । हामीले पर्दामा देखिने पात्रलाई मात्र ख्याल गर्छांै तर पर्दापछाडि रहनेको पनि त्यत्तिकै मिहिनेत रहेको हुन्छ उत्कृष्ट श्रव्यदृश्यका लागि । पर्दापछाडि रहेकामध्ये पनि एउटा महत्वपूर्ण हात हुने गर्दछ प्रोडक्सन कन्ट्रोलर तथा प्रोडक्सन डिजाइनरको । प्रस्तुतिको निर्माण कार्यको सुरूवातदेखि रिलिजसम्म हरतरहले निर्माणलाई अगाडि बढाउन कुनै पनि निर्माण कम्पनीमा प्रोडक्सन डिजाइनरको काम महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । फिल्म, टेलिफिल्म या अन्य कुनै श्रव्यदृश्यको निर्माणका लागि सुटिङस्थल र त्यसलाई आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्ने, कलाकारहरूलाई स्पटसम्म ल्याउने, पुर्‍याउने, सुटिङ, गीत रेकर्ड, डबिङ गराउने, भान्छा र खानेकुराको व्यवस्था मिलाउने, सुटिङ सेड्युल मिलाउने, निर्मातादेखि निर्देशकसम्म वा सम्पूर्ण कलाकार र प्राविधिक जुटाई उनीहरूलाई सघाउनेदेखि व्यवस्थापन गर्नेसम्मको काम प्रोडक्सन डिजाइनरको जिम्मेवारी हुने गर्दछ । प्रोडक्सनप्रतिको बुझाइ पछिल्लो समय फराकिलो बन्दै गएको बताउनुहुने रेश्मा केसीसँग हिमालय टाइम्सको हिँड्दा हिँड्दैका लागि कृष्ण भुसालले गर्नुभएको कुराकानीको संक्षिप्त अंशः–
प्रोडक्सन डिजाइनरका रूपमा यहाँ नेपाली कला क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कहिलेदेखि हुनुहुन्छ यो क्षेत्रमा ?
मिडियासँगको मेरो यात्रा कक्षा चारमा पढ्दादेखिको हो । मैले चार–पाँच कक्षामा पढ्दादेखि त्यतिबेला रहेको चर्चित मिना कार्टुनमा भ्वाइस ओभर गरेकी थिएँ । पछि सिक्दै गएँ । २००१ मा डिजाइन डेस्टिनेसनमा, आभासबाट गरेँ । साथीसँग मनका कुरामा गरेँ । रेडियो एपहरूमा मेरो भ्वाइस ओभर छ । तर, विगत दस वर्षदेखि प्रोडक्सन डिजाइनरका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेकी छु ।
मुख्य जिम्मेवारी के हुन्छ प्रोडक्सन डिजाइनरको ?
चलचित्रको निर्देशक तथा त्यसको स्क्रिप्टले मागेका सम्पूर्ण सामग्री छायाँकनस्थलमा जुटाइदिनेदेखि कलाकार तथा प्राविधिकहरूलाई समयमै छायाँकनस्थलसम्म पुग्ने तथा फर्काउने व्यवस्था गर्ने । छायाँकनस्थलमा हरेक दृश्यका लागि चाहिने आवश्यक सामग्री जुटाउनेदेखि सम्पूर्ण युनिटको खाने, बस्ने, सुत्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी पनि प्रोडक्सनकै हुन्छ । प्रोडक्सन डिजाइनर युद्धमा होमिएको सिपाहीजस्तो भएको पाउँछु म । जसरी युद्धमा गएको सिपाही हरेकखाले परिस्थितिका लागि तयार हुनुपर्छ, यो पेसाले पनि सोहीखालको चरित्र माग गर्दछ । धेरैजसो अवस्थामा निर्देशक र छायाँकारलाई पनि के चाहिएको छ भन्ने थाहा हुँदैन । कहिलेकाहीं टेबल होमवर्क गरेको कुरा सेटमा गएपछि परिवर्तन हुन्छ । यो सबैलाई म्यानेज गर्नुपर्छ प्रोडक्सन डिजाइनरले । प्रोडक्सन डिजाइनर सचेत भएन भने एउटा राम्रो प्रस्तुति पस्किन गाह्रो हुन्छ । भनेजस्तो प्रस्तुति दर्शकमाझ आउन सक्दैन ।
प्रोडक्सन डिजाइनर भएन भने के हुन्छ ?
मलाई के लाग्छ भने सबै अस्तव्यस्त हुन्छ । यो कुनै पनि कम्पनीमा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने मान्छे भएन भने के हुन्छ, त्यस्तै हो । फेरि फिल्म निर्माणमा निर्माता, निर्देशक र प्रोडक्सन डिजाइनको काम महत्वपूर्ण हुन्छ । फिल्म बनेदेखि सेन्सर सकेर निर्माताको हातमा फिल्म नदिउन्जेलसम्म प्रोडक्सन डिजाइनरको भूमिका रहन्छ । फिल्मका लागि आवश्यक उपकरणदेखि लिएर सम्पूर्ण जिम्मा उसको हुन्छ ।
यहाँको प्रोडक्सन डिजाइनरका रूपमा पहिलो कुन थियो ?
मैले प्रोडक्सन डिजाइनरका रूपमा ‘एकल महिला’ बाट काम सुरु गरेकी हुँ ।
तपाईंले प्रोडक्सन डिजाइनरका रूपमा काम गर्नुभएको केहीको नाम लिनुपर्दा ?
मैले अहिलेसम्म आउँदा प्रोडक्सन डिजाइनरका रूपमा काम गरेका केही प्रस्तुतिको नाम लिनुपर्दा ‘दृष्टि’, ‘तिम्रो मेरो’, ‘हाम्रो नेपाल’, ‘नियत’, ‘पारदर्शी व्यथा’, ‘गरिबी’ ‘मिसन’ लगायत रहेका छन् ।
यस क्षेत्रमा कत्तिको चुनौती छ ?
हरेक काममा चुनौती हुने गर्छ । त्यसलाई तपाईंले कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो । हरेक कुराको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण पाटो हो । अब कला क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो बजार सानो छ । हामीले बनाउने प्रस्तुतिको बजेट पनि चाहेजस्तो हुन सक्दैन, जसले धेरै कुरामा कम्प्रमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तपाईंलाई महिला भएकै कारण काम गर्दा गाह्रो भएको कुनै क्षण छ ?
काममा महिला पुरुष हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई । पुरुष भएकै कारण राम्रो गर्न सक्ने हुँदैन र महिला भएकै कारण पनि । तपाईंको खुबीमा भर पर्छ, तपाईं हरेक चिजलाई कसरी लिनुहुन्छ भन्ने कुरा । मलाई महिला भएकै कारण काम गर्न गाह्रो भएको भन्ने त अहिलेसम्म छैन । फेरि मलाई के लाग्छ भने आफूमा धेरै भर पर्छ ।
कत्तिको अध्ययनशील हुनुहुन्छ ?
म आफूलाई अध्ययनशील नै भएको पाउँछु । एकदमै अध्ययन गर्न रुचाउने महिला हुँ म । मेरो अध्ययन पनि राम्रो थियो । बाहिर गएर पढेर पनि आएँ । यो त कोर्सको कुरा भयो । तर, म हरेक समय अध्ययन गरिरहेकी हुन्छु । फुर्सद मिल्यो कि पढ्छु ।
प्रायः कस्ता पुस्तक पढ्न मन पर्छ ?
म सबैखालका पुस्तक पढ्छु । आख्यान र गैरआख्यान पढ्छु । अन्य जानकारीमूलक पुस्तक पनि पढ्छु । पछिल्लो समय इन्टरनेटका माध्यमबाट पनि विभिन्न नयाँ–नयाँ कुराहरू अध्ययन गरिरहेकी हुन्छु ।
यो क्षेत्रमा कत्तिको कम्पिटिसन छ ?
मैले सुरूदेखि आजसम्म कसैलाई पनि कम्पिटेटरका रूपमा हेरिनँ । म अरूसँग कम्पिटिसन गर्नका लागि आएकी पनि होइन । म आजको रेश्मा केसीभन्दा भोलिको रेश्मा केसीलाई बेटर बनाउँछु भनेर कम्पिटिसन गर्छु । सायद मेरो कम्पिटेटर म नै हो ।
परिवारबाट तपाईंका कार्यमा कत्तिको सपोर्ट मिलेको छ ?
परिवारको सपोर्ट नभए कोही पनि केही पनि गर्न सक्दैन । मैले आफ्ना कामलाई उत्कृष्टतापूर्वक गरिरहेकी हुनाले पक्कै सपोर्ट छ ।
हिँड्दा हिँड्दै छुटेका केही छन् कि ?
म यस्तो इन्टरभ्यु दिइरहने आदत नभएको मानिसलाई यसरी मेरा केही कुरा र नेपाली कला क्षेत्रका केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो आभारी छु ।
अघिल्लो लेख अफगानिस्तानको कमान सम्हाल्दै मुल्ला बरादर।
पछिल्लो लेख ‘प्रचण्ड’ नातिनी स्मिताको पहिलो हिन्दी गीत।